2022 တွင်စမ်းသပ်ရန်အကောင်းဆုံး CBD ဆီ Tinctures - shopgiejo.com
CBD သည် ဆေးခြောက်တွင် ဒုတိယ အဖြစ်အများဆုံး cannabinoid ဖြစ်သည်။ THC နှင့်မတူဘဲ CBD သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ မရှိပါ။ သို့သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ ကျန်းမာရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် CBD အသုံးပြုမှုသည် ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး CBD သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက် ကျယ်ပြန့်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ အကောင်းဆုံးကို ရှာဖွေပါ။ CBD ရေနံ CBD ဆီကို ဘယ်လိုဆေးသောက်ရမလဲဆိုတဲ့ အချက်အလက်နဲ့အတူ အခုစမ်းကြည့်သင့်တဲ့ tinctures တွေပါ။
CBD ၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများစွာသည် သရုပ်ဖော်ပြသချက်ဖြစ်ပြီး ခိုင်မာသောလေ့လာမှုများ ကင်းမဲ့နေသော်လည်း ကုထုံးဆိုင်ရာ အလားအလာသည် ကြီးမြတ်သည်ဟု ငြင်းလို့မရပါ။ အောက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိပ်တန်းဖြစ်နိုင်သော CBD အကျိုးကျေးဇူးများကို ကြည့်ရှုနေသည်။
ပူပင်သောကနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း လက္ခဏာများ သက်သာစေခြင်း။
CBD သည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် စိတ်ကျရောဂါကုသမှုများကို ကူညီပေးရန်အတွက် အသုံးများဆုံးဖြစ်သည်။ အချို့သောလေ့လာမှုများအရ cannabinoid သည်စိတ်ခံစားချက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော neurotransmitter ဖြစ်သော serotonin ကိုဦးနှောက်၏တုံ့ပြန်မှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအကြံပြုသည်။
Cannabinoids များသည် endocannabinoids များနှင့် ထိတွေ့ပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို စနစ်တကျ လျှော့ချပေးသည်။ ရောင်ရမ်းမှုသည် အခြေအနေများနှင့် ရောဂါများစွာတွင် ပါဝင်နေသည်ဟု ယူဆပါက CBD ၏ ကုထုံးဆိုင်ရာ အလားအလာသည် နာကျင်မှုသက်သာခြင်းမှ အရေပြားအခြေအနေများကို ကုသခြင်းအထိ ကြီးမားသည်ဟု ဆိုရန် စိတ်ချရပါသည်။
CBD သည် သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းထားရန် သဘာဝ ကုထုံးတစ်ခုအဖြစ် ကတိပြုပါသည်။ ထို့အပြင်၊ CBD ၏ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများသည် နှလုံးရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေပြီး oxidative stress ကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ CBD သည် နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုသည်ဟု ယူဆပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးချစ်ခင်မှုဖြင့်ရုန်းကန်နေရသူများသည် ၎င်းတို့၏နုတ်ထွက်ခြင်းလက္ခဏာများကို စီမံခန့်ခွဲရန် CBD မှအကျိုးခံစားနိုင်ကြသည်။ ထို့အပြင်၊ CBD သည် စိတ်လှုံ့ဆော်ပေးသောဆေးဝါးများနှင့် opioids နှင့် နီကိုတင်းအသုံးပြုသူများတွင် မူးယစ်ရှာဖွေသောအပြုအမူများကို လျှော့ချရာတွင် ထိရောက်မှုရှိသည်ဟု ယူဆပါသည်။
သင်သောက်သင့်သော CBD ပမာဏသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၊ သင်ကုသရန် ရည်မှန်းထားသည့် အခြေအနေနှင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ် ဓာတုဗေဒကဲ့သို့သော အချက်များစွာပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ သို့သော် ယေဘူယျအားဖြင့် လက်မ၏ စည်းမျဉ်းအတိုင်း၊ သင်သည် သေးငယ်သော စတင်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဆရာဝန်မှ အခြားနည်းဖြင့် အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါက တစ်နေ့လျှင် 40mg ထက် မပိုစေရပါ။ တစ်ပတ်အကြာတွင်၊ သင်သည် ဆေးပမာဏကို 5mg တိုးနိုင်ပြီး သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများကို ကုသရာတွင် ထိရောက်မှုရှိသည်ဟု သင်ခံစားရသည်အထိ ဆက်လက်တိုးနိုင်ပါသည်။ CBD အလွန်အကျွံမယူမိစေရန် သင်ယူနေသော CBD ပမာဏကို ခြေရာခံရန် အရေးကြီးသည်။
ဘယ်လို CBD ဆီအမျိုးအစားကို ရွေးမလဲ။
စျေးကွက်တွင် CBD ဆီအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ အချို့တွင် CBD သာပါဝင်ပြီး အချို့တွင် အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ CBD ရေနံကိုရွေးချယ်သောအခါ၊ သင်အလိုရှိမရှိစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်-
CBD တစ်ခုတည်းသာပါရှိသော CBD ရေနံကို သီးခြားခွဲထုတ်ပါ။
အခြားသော cannabinoids များပါရှိသော ကျယ်ပြန့်သော ရောင်စဉ် CBD ရေနံ။
CBD၊ အခြား cannabinoids နှင့် 3% THC ထက်နည်းသော CBD ရောင်စဉ်အပြည့်ဆီ။
2022 အတွက် ထိပ်တန်း CBD ဆီများ
2018 ခုနှစ်မှစ၍ CBD သည် US တွင်တရားဝင်ဖြစ်ပြီး CBD ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်၊ ဆီများ၊ လိမ်းဆေးများ၊ ဆေးတောင့်များ၊ နှင့် စားသုံးနိုင်သောပစ္စည်းများ အပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သော CBD ပါ၀င်သော ထုတ်ကုန်များကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား သင်၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ CBD အသုံးပြုမှုနည်းလမ်းကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံးပုံစံမှာ CBD ရေနံဖြစ်သည်မှာ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါ၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးကွက်တွင် လက်ရှိရှာဖွေနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကို မျှဝေနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
101CBD လျှော်ကုန်ကြမ်း ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် မိသားစုမှ လည်ပတ်သော CBD ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့က "CBDA နှင့် CBGA တွင် မြင့်မားသော ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်း အပင်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် မူပိုင်ခွင့်-ဆိုင်းငံ့ထားသော အအေးထုတ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်” ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုထူးခြားစေသောအရာကိုမေးမြန်းသောအခါ 101 CBD မှ Justin က "အစိမ်း၊ အပင်တစ်ပင်လုံး၊ အအေးထုတ်ယူခြင်းကဲ့သို့ လတ်ဆတ်သောလိမ္မော်သီးဖျော်ရည်ကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည် ဤအံ့ဖွယ်အပင်၏ အစိတ်အပိုင်း ၅၀၀ ကျော်ကို စုပ်ယူနိုင်စေပါသည်။"။
အရသာ - Peppermint, Tropical Bliss, Citrus, Blackberry Cobbler, Bacon, Natural, Natural Sweet
ခွန်အား - 400mg-3,200mg
စျေးနှုန်း – $47 – $197
သီးခြားဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ - ဟုတ်တယ်
10CBD CBD ရေနံကိုမြှင့်တင်ပါ။
Boost CBD ဆီသည် အော်ဂဲနစ်အမေရိကန်ဂျင်ဆင်းဖြင့် ကြွယ်ဝသည်။ CBD ရေနံကိုမြှင့်တင်ပါ။ သင့်အား နေ့စဥ်အချိန်မှန် ကန်ကန်နိုင်ရန် ကူညီပေးသည့် သဘာဝစွမ်းအင်ကို မြှင့်တင်ပေးသည် သို့မဟုတ် အပိုအရာပြီးမြောက်ရန် သင့်ကိုယ်သင် အားဖြည့်ပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်သူနှစ်ဦးသည် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ် Boost ကိုအသုံးပြုပြီး ပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်ပို၍အလုပ်လုပ်နိုင်စေသည့်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်မြှင့်တင်မှုကိုတွေ့ကြုံနေရကြောင်းသတင်းပို့ပါသည်။ အခြားစမ်းသပ်သူ နှစ်ဦးက ၎င်းကို နံနက်ခင်းတွင် အသုံးပြုခဲ့ပြီး တစ်နေ့တာလုံး အားအင်များ ခံစားရသည်ဟု ဆိုသည်။
JustCBD သင်ရှာဖွေနိုင်သော CBD အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီကို 2017 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းက ၎င်းသည် အဆင့်များတစ်လျှောက် မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် CBD သုံးစွဲသူများကြားတွင် လူသိများပြီး US မှ ရိတ်သိမ်းထားသော လျှော်ပင်မှ ထုတ်လုပ်သည့် အရည်အသွေးမြင့် CBD ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အတွက် နာမည်ကျော်ကြားသည်။ JustCBD သည် ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတွင်ပါဝင်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများအပြင် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီအတွက် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးသောကြောင့် သင်စားသုံးသမျှ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသမျှ အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများကို လိုက်နာနိုင်မည်ဟု စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။
JustCBD အုန်း CBD ဆီ Tincture
ခွန်အား - 50mg-1,500mg
စျေးနှုန်း - $9.99 မှ
အဆိုပါ အုန်းသီး CBD ဆီဖျော်ရည် အုန်းသီးတွင် စုပ်ယူမှုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက် MCT အဖြစ် အုန်းသီးပါဝင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ရလဒ်များကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာခံစားရမည်ဖြစ်ပြီး အဆုံးစွန်သော CBD အတွေ့အကြုံကို အာမခံပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ အုန်းသီးအရသာသည် လျှော်ပင်အရသာကို ဖုံးအုပ်ထားပြီး အစားအစာ သို့မဟုတ် အဖျော်ယမကာတစ်ခုခုတွင် ထည့်သည့်အခါတွင် ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ မနက်ခင်း ဖျော်ရည်ထဲကို ထည့်လိုက်တဲ့အခါ ဒီ tincture က အလုပ်များတဲ့နေ့အတွက် ပြင်ဆင်ရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်မအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အိပ်ရာမဝင်မီ အနားယူရန် ညဘက်တွင် သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
FOCL ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လေးယောက်ဖခင် Ken Lawson မှ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အလုပ်အလွန်အကျွံလုပ်ခြင်းကြောင့် အသက် 20 တွင် တသမတ်တည်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို တွေ့ကြုံပြီးနောက် အကြံဉာဏ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆုံးမရှိသော ဆရာဝန်များ ရုံးသို့ လာရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက် Ken သည် နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲမှုအချို့ကို ပြုလုပ်ရန် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းဖြင့် Ken သည် အသုံးမပြုရသေးသော CBD ၏အလားအလာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းမရှိခြင်းနှင့် အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများ များပြားခြင်းကြောင့် ခရီးကို အိပ်မက်ဆိုးဖြစ်စေနိုင်သည်ကို သူသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် သူ့ကိုယ်သူ ယူထားတာ "အကောင်းဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အရည်အသွေးမြင့် ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များနှင့် လုံးဝပွင့်လင်းမြင်သာသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ။"
ခွန်အား - 300 မီလီဂရမ်မှ 2,000 မီလီဂရမ်
စျေးနှုန်း - $29 မှ
Vegan - မဟုတ်ဘူး
FOCL ပရီမီယံ CBD ကျဆင်းသွားသည်။
အဆိုပါ FOCL ပရီမီယံ CBD ကျဆင်းသွားသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကို အေးချမ်းစေမည့် ဖော်မြူလာဖြင့် ရိုးရှင်းသော ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FOCL သုံးသပ်ချက် ပရီမီယံကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ် CBD အပြင်၊ အစက်များတွင် အော်ဂဲနစ် MCT ဆီနှင့် အော်ဂဲနစ်အရသာများ ပါဝင်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ အစက်များသည် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ပိုက်ပိုက်ပါသည့် ပုံစံကောင်း ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ပုလင်းထဲတွင် ပါရှိသည်။ ၎င်းသည် အလွန်ရွှေဝါရောင်ရှိပြီး ချောမွေ့သော texture ရှိသည်။ သူ့အရသာက တော်တော်ရဲရင့်ပေမယ့် တကယ့်အရသာနဲ့တူတယ်။
အဆိုပါ စက်ဝိုင်းအပြည့် လျှော်ပင် ကုမ္ပဏီကို ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မျှဝေထားပါတယ်"ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် (ကရုဏာ) မေတ္တာတရားတို့ပေါ်တွင် တည်ထောင်ထားသော ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ကျင့်ဝတ်များသည် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ သမာဓိနှင့် တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုတို့ဖြစ်သည်။” ထိုအဆုံးသတ်အတွက်၊ အဖွဲ့သည် ဥရောပနှင့် အမေရိကတို့မှ စိုက်ပျိုးထားသော အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး CBD ကို ယူဆောင်လာရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီကို 2015 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၎င်းသည် The Hemp Federation Ireland ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ထုတ်ကုန်အားလုံးကို ကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်မှုကျင့်ထုံးများကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ပြင်ပဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စမ်းသပ်ထားသည်။
CBD ဆီ 15%
အရသာ - ငရုတ်ကောင်း ၊ သံပုရာ ၊ အနံ့ မပါ
ခွန်အား - 1,500 မီလီဂရမ်
စက်ဝိုင်းအပြည့် လျှော်ပင် Full-Spectrum CBD ရေနံ
အဆိုပါ Full- ရောင်စဉ် CBD ရေနံ Full Circle Hemp ဖြင့် CBD 1,500mg ပါရှိသည်။ ၎င်း၏ အလယ်အလတ်တန်းစား အာနိသင်ကြောင့် အပိုတစ်ခုခု လိုအပ်သည့်အခါ ဆီသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ၎င်းတွင် CBDa၊ CBD၊ CBG နှင့် CBDV ကဲ့သို့သော cannabinoids နှင့် terpenes အစုံအလင်ပါရှိသည်၊ အလွန်ထိရောက်သောရလဒ်များကိုပေးသည်။ အနံ့အရသာမပါသော ဗားရှင်းအပြင် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နှင့် သံပုရာရွေးချယ်စရာများပါရှိသည့် ဆီသည် လူတိုင်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ သဘာဝဗားရှင်းကို စမ်းသုံးကြည့်တော့ အရသာက အရမ်းသာယာပြီး အရမ်းမပြင်းထန်ဘူးလို့ ပြောရပါမယ်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် မည်သည့်အရသာမှ မရှိခဲ့ပါ။
အရသာ - မွှေးသောပန်း/လေးညှင်းအရသာ
ခွန်အား - 750 မီလီဂရမ်
ဈေးနှုန်း – $75
Reverie Evening Herbal Supplement
အဆိုပါ Reverie Evening Herbal Supplement Jihi သည် အိပ်စက်ခြင်းကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ထားသော ပရီမီယံ CBD ဆီဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သော spectrum CBD၊ melatonin နှင့် chamomile တို့ကိုကြွားလုံးထုတ်ခြင်းဖြင့် အဆိုပါ tincture သည် သင့်အား ပြေလျော့စေပြီး အိပ်ရေး-နိုးသည့်စက်ဝန်းကို ထိန်းညှိပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားဘိန်းစေ့၊ clary sage၊ skullcap နှင့် organic stevia ကဲ့သို့သော အိပ်ပျော်စေသောဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါသည်။ ဤပါဝင်ပစ္စည်းများသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြေလျော့စေရန်၊ ကြွက်သားတင်းမာမှုကို သက်သာစေရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အာရုံကြောများကို ငြိမ်သက်စေရန် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ Jihi ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ သက်သေပြခဲ့သည်။
ကျန်းမာသောအမြစ် Hemp WBENC လက်မှတ်ရထားသော အမျိုးသမီးပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် စမ်းသပ်မှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားခြင်း၊Healthy Roots Inc ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် 21 CFR အပိုင်း 110, 111, 117 တွင်ဖော်ပြထားသည့် FDA လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ cGMP ၏ ​​လိုက်နာမှုအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့သည် အခြေခံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးကို FDA စံနှုန်းများကို လိုက်နာစေသည့် ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့်များအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်များဖြစ်သည်။
အာတိတ်အေးဆေး CBD Isolate Drops
အရသာ - ပူဒီနာ
စျေးနှုန်း - $ 34
ကျန်းမာသောအမြစ် Hemp CBD ဆီများ
CBD isolate 300mg ဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။ Arctic Chill CBD အထီးကျန် အစက်များ THC ကင်းစင်သည်။ ပူဒီနာအရသာက သင့်ကို လန်းဆန်းမှုကို ပေးစွမ်းပြီး သင့်စိတ်ကို ကြည်လင်စေပါလိမ့်မယ်။ အပြည့်ထည့်ထားသော dropper တစ်ခုသည် 10mg CBD ပါ၀င်သောကြောင့် စွမ်းအင်ပေါက်ကွဲစေပါသည်။ ဤအစက်များသည် သင့်အား အနားယူရန် အပိုတစ်ခုခု လိုအပ်နေချိန်များအတွက် ဤထုတ်ကုန်ကို ကောင်းမွန်စေသည့် မသက်မသာမှုနှင့် အပျော့စားနာကျင်ကိုက်ခဲမှုများကို ထိရောက်စွာ သက်သာစေနိုင်သည်ကိုလည်း သိရှိခွင့်ရသည့်အတွက် ကျေနပ်မိပါသည်။
PureKana အကောင်းဆုံးနှင့် ကွဲပြားသော ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးရှိသော American CBD အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်မှာ "အရည်အသွေးမြင့် hemp cannabidiol (CBD) အခြေခံထုတ်ကုန်များကိုစျေးကွက်သို့ယူဆောင်လာရန်စက်မှုလုပ်ငန်းကို ဦး ဆောင်ပါ။" ထုတ်ကုန်များကို Kentucky တွင် စိုက်ပျိုးထားသော အသိအမှတ်ပြု အော်ဂဲနစ် လျှော်ပင်ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ထိပ်တန်းအရည်အသွေးသေချာစေရန်လည်း စမ်းသပ်ထားသည်။
အရသာ - ဘလူးဘယ်ရီ
စျေးနှုန်း - $ 175
PureKana အိပ်စက်ခြင်းအကူအညီ Tincture
ကာနာစစ်စစ်s Sleep Aid ဖျော်ရည် တကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုပါ။ အိပ်ပျော်ခြင်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဖျော်ရည်သည် 1,500mg CBD၊ melatonin 1mg နှင့် CBN ထုပ်ပိုးပါသည်။ ၎င်းအပြင်၊ ဤ CBD ဆီတွင် မူပိုင် Sleep Terpene Rich Extract 35mg ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် လာဗင်ဒါ၊ သစ်သား၊ ဟော့ပ်၊ chamomile၊ စပါးလင်၊ ထင်းရှူး၊ စံပယ်နှင့် လိမ္မော်တို့ ၏ ထူးခြားသော ရောစပ်မှုဖြစ်သည်။ အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ လိမ်းတဲ့အခါ အကောင်းဆုံးရလဒ်ကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ ဘလူးဘယ်ရီလို အရသာရှိတယ်။
အက္ခရာစိမ်း CBD အတွေ့အကြုံကို ရိုးရှင်းစေရန် ရည်ရွယ်သည့် ကျန်းမာရေးစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ CBD အပြင်၊ အခြားအခြားသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်အချို့ကိုလည်းသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ Alexej Pikovsky နှင့် Viktor Khliupko တို့သည် ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Alexej သည် vapes နှင့် oils များထက် စျေးကွက်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ထိရောက်သော ထုတ်ကုန်များ နည်းပါးနေကြောင်း သိရှိလာသောအခါတွင် Alexej သည် CBD အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီ။ ထို့ကြောင့် သူသည် စီးပွားရေးတွင် သူ၏နောက်ခံကိုအသုံးပြုပြီး Alphagreen ကိုဖန်တီးရန် စိတ်ကူးတစ်ခုရလာသည်။ ထို့နောက် အိုင်ဒီယာကို လက်တွေ့အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ကူညီပေးခဲ့သော e-commerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ Viktor ထံ ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
Alphagreen 10% CBD ဆီ
Alphagreen 10% အဆီ
အဆိုပါ Alphagreen 10% အဆီ အမှတ်တံဆိပ်နောက်ကွယ်မှအဖွဲ့သည် ရာနှင့်ချီသော CBD ဆီများကို စမ်းသပ်ပြီး ၎င်းတို့၏ စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များကို ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်စင်သော CBD သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် ယူကေတွင်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ဆီသည် vegan နှင့် THC မပါရှိပါ။ ထို့အပြင်၊ လူတိုင်း၏စတိုင်နှင့်လိုက်ဖက်သောသန့်ရှင်းပြီးရိုးရှင်းသောဖော်မြူလာရှိသည်။ အဆီသည် ချောမွေ့သောရွှေအရောင်ရှိပြီး ချောမွေ့ပြီး ထူထဲသော texture ရှိသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် cannabinoids များ၏အပူပြိုကွဲခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သေချာသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်သည် ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ပေါင်းသတ်ဆေးများနှင့် လေးလံသောသတ္တုများ ကင်းစင်သော 97.5% သန့်စင်သော CBD သီးခြားခွဲထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့တွင် မြင်တွေ့ရသည့် အကောင်းဆုံးရလဒ်များကို ပေးဆောင်သည်။ Alphagreen ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။.
Nu-x CBD tinctures၊ vape ဖျော်ရည်နှင့် အာရုံစူးစိုက်မှု အပါအဝင် ပရီမီယံ ရောင်စဉ်အပြည့် CBD ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များသည် vegan၊ အော်ဂဲနစ်ဖြစ်ပြီး THC မပါဝင်ပါ။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ထိပ်တန်းအရည်အသွေးကို သေချာစေရန် ပြင်ပကုမ္ပဏီမှ စမ်းသပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၊ Nu-x သည် ၎င်းတို့၏ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း နေထိုင်နိုင်စေသည့် CO2 ထုတ်ယူသည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။သဘာဝအားဖြင့် သန့် ရှင်းသည်။"
Nu-X Citrus CBD Tincture — ဖလော်ရာ
အဆိုပါ ဖလော်ရင့်ရင့်၊ ချိုပြီး သကြားလုံးလို အရသာရှိပါတယ်။ အခြေခံအရသာမှာ လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပြီး သံပုရာသီးဖြင့် လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လန်းဆန်းစေပြီး နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက် ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ Tincture ကို အားသာချက်များစွာဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော dropper ပါရှိသော 30ml ပုလင်းတွင် ပါရှိပါသည်။ စျေးပိုပေးပေမယ့် ဒါက CBD ဖျော်ရည် ပိုက်ဆံလည်းတန်တယ်။ အလွန်ထိရောက်မှု၊ လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး နာကျင်မှုကို ချက်ချင်းနီးပါးသက်သာစေသည်။
ဝက်နေ့ ချီကာဂိုအခြေစိုက်၊ လူမည်းပိုင် CBD အမှတ်တံဆိပ်သည် အဆင့်များတစ်လျှောက် လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာသည်။ ထုတ်ကုန်များကို အရင်းအမြစ်၊ ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် ထုပ်ပိုးရန်အတွက် မွေးမြူရေးခြံများနှင့် ပရိုဆက်ဆာများနှင့် တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အမှတ်တံဆိပ်သည် ထိပ်တန်းအရည်အသွေးကို သေချာစေသည်။ အရာအားလုံးကို FDA အသိအမှတ်ပြုစက်ရုံတွင် craft batches ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်။
CBD Isolate ရေနံ Tincture
အရသာ - အရသာမရှိသော
ခွန်အား - 2,000mg/3,000mg
စျေးနှုန်း - $99.99 မှစတင်သည်။
ဝက်နေ့ CBD Tincture ကိုခွဲထုတ်ပါ။
အဆိုပါ CBD tincture ကိုခွဲထုတ်ပါ။ 100% သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြီး အတုအပ အနံ့အရသာများ၊ အရောင်များနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများ ကင်းစင်ပါသည်။ အရသာမရှိပေမယ့် ပါးစပ်ထဲမှာ ခါးနည်းနည်းကျန်နေတော့ ရေ ဒါမှမဟုတ် ဖျော်ရည်နဲ့ နှပ်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်၊ သင်သည်သင်၏ CBD ဆီအချိုရည်များသို့မဟုတ်အစားအစာနှင့်ရောနှောလိုပါက၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆီအပြည့်ပါတဲ့ အစက်က စိုးရိမ်ပူပန်မှု လက္ခဏာတွေကို သက်သာရာရစေပြီး ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ထူးခြားသောအမှတ်တံဆိပ်အမည်၏နောက်ကွယ်ရှိဇာတ်လမ်းကို Georgana ၏ Venezuelanian မူရင်းတွင်ဝှက်ထားသည်။ “ဒီစွန့်စားမှုဟာ သူ့အဆက်အနွယ်ကနေ ဘိုးဘွားအဘွားတွေရဲ့ လူပြန်ဝင်စားခြင်းဆိုတဲ့ ဉာဏ်ပညာဟောင်းကို သယ်ဆောင်လာသလို ခံစားရတယ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အနာဂတ်သို့ ပြောင်းလဲမည်ဟု ကတိပေးသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးကဲ့သို့ ခံစားရသည်။ သူမကို Cerena လို့ခေါ်ရမယ်၊ အဖွဲ့ကိုမျှဝေသည်။ ဧကန်မုချ သတ်မှတ်ထားသော အရာများအနက် Cerena အရောင်းအ၀ယ်အားလုံး၏ 1% ကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းတရားများထံ လှူဒါန်းရန် ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေ၏အနာဂတ်ကိုကာကွယ်ရန် အစပြုမှုသည် အမှန်တကယ် မှတ်သားဖွယ်ကောင်းပါသည်။
အရသာ - ထင်းရှူး၊ ပျားရည်နှင့် ငရုတ်ကောင်းပေါင်းစပ်
ခွန်အား – 750mg/350mg
စျေးနှုန်း - $31.50 မှစတင်သည်။
Cerena မှအဓိက Spectrum CBD ရေနံ Calma. နာမည်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၊ ဤဆီသည် သင့်အား ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသောအခြေအနေသို့ပြောင်းရန်၊ ပိုမိုဟန်ချက်ညီစေရန်နှင့် အာရုံစူးစိုက်သောစိတ်ထားကိုရရှိစေရန် ကူညီပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ နှစ်ပတ်လုံးမှာ သင်ယူခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ Cerena သုံးသပ်ချက်အမှတ်တံဆိပ်၏ထူးခြားသောဖော်မြူလာတွင် 750mg hemp cannabinoids သို့မဟုတ် full dropper တစ်ခုလျှင် 25mg ပါဝင်ပါသည်။ 1 အောင်စ ပုလင်းသည် $55.30 ကျသင့်ပြီး အလွန်တတ်နိုင်သည်။ $350 ဖြင့် 31.50mg အာနိသင်လည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပညာရှိအိမ် တည်ထောင်သူ Amanda သည် CBD ရေနံ၏အလားအလာကိုသဘောပေါက်ပြီးနောက် အမှန်တကယ်အသက်ဝင်လာသော CBD အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကပ်ရောဂါဖိစီးမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရင်း၊ သူမသည် ပိုမိုအာရုံစိုက်ပြီး စိတ်တည်ငြိမ်မှုရရှိရန် CBD သို့ လှည့်သွားခဲ့သည်။ “ဒါကို ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို House of Wise နဲ့ သူတို့ရဲ့ အိပ်စက်မှု၊ လိင်မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အခွင့်အာဏာ ပေးဆောင်ဖို့ ငါလုပ်ဆောင်နေပါတယ်" Amanda ကပြောပါတယ်။
အရသာ - Chamomile နှင့် Passion Fruit
စျေးနှုန်း - တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူမှုအတွက် $65; စာရင်းသွင်းသောအခါ $58.50/လ
ပညာရှိအိမ် ဖိအားများ ကျဆင်းသွားသည်။
တစ်စက်လျှင် L-theanine 50mg နှင့် 15mg full-spectrum CBD တို့ဖြင့် ရောစပ်ထားသည်။ ဖိအားများ ကျဆင်းသွားသည်။ သင့်အာရုံကြောများကို ငြိမ်သက်စေပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုရရှိရန် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်တွင် 0.3% THC ထက်နည်းပါသည်။ US တွင် စိုက်ပျိုးထားသော လျှော်ပင်ကို အသုံးပြု၍ 100% သဘာဝနှင့် အော်ဂဲနစ်လည်းဖြစ်သည်။ CBD အစက်များတွင် ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်စာများ မပါဝင်ပါ။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် အံ့သြဖွယ်အရသာ— chamomile နှင့် passion fruit တို့ဖြင့် အရသာရှိပြီး အသီးအနှံနှင့် ပန်းပွင့်သောအရသာရှိသည်။ တစ်နေ့လျှင် သုံးကြိမ်ထက် ပိုမသောက်ရန် အကြံပြုထားသည်။ ကံကောင်းစွာဖြင့်၊ သင်သည် 1-2 စားသုံးခြင်းဖြင့် ထုတ်ကုန်များ၏ အကျိုးကျေးဇူးကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်မှာ တည်ထောင်၊ Alpinos အမေရိကန်ဈေးကွက်တွင် နာမည်ကြီး CBD အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံ 25+ နှစ်ကျော်ရှိ၍ အမှတ်တံဆိပ်သည် ၎င်း၏အလေ့အကျင့် Suisse လက်မှတ်ရရှိခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ထိပ်တန်းအရည်အသွေးကို သေချာစေရန် ထိန်းချုပ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လျှော်ပင်ကို စိုက်ပျိုးသည်။ Alpinols သည် CO2 ထုတ်ယူသည့်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီး ပြင်ပကုမ္ပဏီဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးကို စမ်းသပ်သည်။
Alpinols မူရင်းဆီ (5-25%)
ခွန်အား - 500mg-2,500mg
Alpinols သည် မတူညီသော ပြင်းအားများဖြင့် CBD ဆီများစွာကို ပေးဆောင်သည်။ မူရင်းလိုင်းသည် ပြင်းအား 5-25% ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကို ပို့ခဲ့တယ်။ 20% full-spectrum ဆီပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အစွမ်းအစကို သဘောကျတယ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ပြန်လည်သုံးသပ်သူအားလုံးသည် အရေပြားကို ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပြီး ယားယံမှုနည်းပါးကြောင်း တိုင်ကြားခဲ့သည်။ ဝက်ခြံကို ရုန်းကန်နေရသူ တစ်ဦးက အဆီသည် သူ့အသားအရေအတွက် ကောင်းမွန်သည်ဟု ခံစားရကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ဤထုတ်ကုန်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နှင့် နို့တိုက်ချိန်အတွင်း အသုံးပြုရန် မသင့်လျော်ကြောင်း သတိရပါ။
လျှော်ကိုချစ် သဘာဝ ဖြည့်စွက်စာများကို လှည့်စားခဲ့သော ကျောင်းဟောင်း သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ဖြစ်သည့် Tony Calamita နှင့် Tom Rowland တို့က 2015 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် Love Hemp ကို တည်ထောင်ကာ သန့်ရှင်းသော အရည်အသွေးမြင့် နှင့် ကွဲပြားသော CBD ထုတ်ကုန်များကို ကမ်းလှမ်းရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည့် CBD လုပ်ငန်းတွင် စံနှုန်းများ ကင်းမဲ့နေကြောင်း လျင်မြန်စွာ သိရှိလာသည်။ ယနေ့တွင်၊ Love Hemp သည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထိပ်တန်းရောင်းချသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို UK လျှော်စက်ရုံတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ဆန်းသစ်သောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဟု လူအများက ယူဆကြသည်။
အရသာ - သဘာဝ၊ ဗလင်စီယာလိမ္မော်ရောင်၊ ငရုတ်ကောင်း၊ နှင့် တောရိုင်းချယ်ရီ
စျေးနှုန်း - £14.99 မှစတင်သည်။
အဆိုပါ CBD ရေနံကျဆင်းသွားသည် ကျယ်ပြန့်သော spectrum များသည် ၎င်းတို့တွင် THC မပါဝင်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထို့ထက်မက၊ ထုတ်ကုန်သည် vegan ဖြစ်ပြီး 100% gluten-free ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ Love Hemp အစက်များကို ပရီမီယံ CBD နှင့် MCT ရေနံတို့ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ဖန်စီပုလင်းကို အမာခံအိတ်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၊ နှစ်ပတ်လုံး အချစ် Hemp ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။Dropper သည် mg အချက်အလက်ပါ၀င်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသိရှိထားသောကြောင့် သင်၏ CBD စားသုံးမှုကို ထိုးရန်အလွန်လွယ်ကူပါသည်။
ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီမှာ Leafwell ရုက္ခဗေဒ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထုတ်လုပ်သည်။ အဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေး နှင့် ကျန်းမာရေး နှင့် ရုက္ခဗေဒ ပညာရပ် တို့ကို စိတ်အားထက်သန် သည် ။ ၎င်းတို့သည် ထိုစိတ်အားထက်သန်မှုကို သန့်ရှင်းသော ထုတ်ကုန်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ သင့်ကိုယ်သင် ဂရုစိုက်မှုဓလေ့များကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ “ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသုတ်အားလုံးတစ်လျှောက်လုံး လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး အရည်အသွေးသေချာစေရန်အတွက် အသုတ်ငယ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။" ဟု Leafwell Botanicals မှအဖွဲ့ကပြောသည်။
အပြည့်အဝ Spectrum Lemon၊ Lime နှင့် Tumeric CBD ဆီ Tincture
အရသာ - သံပုရာ၊ သံပုရာသီး၊ နနွင်းမှုန့်
စျေးနှုန်း - $ 50
Leafwell ရုက္ခဗေဒ Full-Spectrum ဆီ Tincture
စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ ဟန်ချက်ညီညီ ခံစားရချင်ရင်၊ full-spectrum CBD ရေနံဖျော်ရည် အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကို ပြုလိမ့်မည်။ သံပုရာသီး၊ သံပုရာသီး နဲ့ နနွင်းတို့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အရသာကို မြည်းစမ်းကြည့်တော့ အံ့ဩမိသွားတယ်။ တော်တော် အရသာရှိပြီး လန်းဆန်းတယ်။ သင်မြန်မြန်နိုးထလိုသောအခါတွင် ၎င်းသည် နံနက်ခင်းအသုံးပြုရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။
သန့်ရှင်းသော သဘာဝ သဘာဝကပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးအရာတွေကို သင်ရရှိဖို့ သေချာပါစေ။ ခေတ်မီနည်းပညာဖြင့် စွမ်းဆောင်ထားသည့် Pure Natur သည် CBD ၏ အံ့သြဖွယ်ဂုဏ်သတ္တိများကို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားသည့် 100% သဘာဝထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ဇီဝရရှိနိုင်မှုနှင့် အမြင့်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို သေချာစေသည့် ထူးခြားဆန်းသစ်သော အအေးခံနည်းလမ်းကို အသုံးပြုထားသည်။ Solvents များသည် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် မပါဝင်ပါ — ရေနှင့် ဖိအားမျှသာ။ အခြေခံအားဖြင့်၊ လျှော်ပင်ကို ဓာတုဗေဒအရည်ပျော်ဆေးများမသုံးဘဲ ခေတ်မီစက်ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ညှစ်သည်။
Pure Natur Full-Spectrum CBG ဆီ
ခွန်အား - 800mg သန့်စင်သော CBG နှင့် အခြား cannabinoids 202mg
စျေးနှုန်း - ယူရို 84,95
Pure Natur ၏ CBG ဆီ
Pure Natur ၏ CBG ဆီ ရောင်စဉ်အပြည့်ရှိပြီး terpenes နှင့် သတ္တုဓာတ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော cannabinoids အမြောက်အမြားပါရှိသည်၊ ၎င်းသည် entourage effect ကိုပေးစွမ်းရန် အတူတကွလုပ်ဆောင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဤဆီသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကာလအတွင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည့် အံ့ဖွယ်ကုထုံးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ Pure Natur ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။. အဆီသည် အမှတ်တံဆိပ်၏ထူးခြားသောအအေးခံနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းတွင် ရိုးရာဆီထက် လျှော်ပင်အပင်အာဟာရများ ပိုမိုပါဝင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်၊ CBG ဆီသည် ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်အပြင် ဇီဝရရှိနိုင်မှုပိုမိုမြင့်မားသည်။
ထုတ်ယူ Labs က အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများဖြင့် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး CBD ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ဆုရ CBD ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖွဲ့သည် ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုလုံးကို အိမ်တွင်း၌ထားရှိခြင်းဖြင့် ၎င်းကိုသေချာစေသည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီမှ ကိုယ်စားလှယ်က မျှဝေပေးသည်။ "CBG၊ CBN၊ CBC၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များ၊ ချောကလက်များ၊ လိမ်းဆေးများ၊ ဖျော်ရည်များ၊ သွားဖုံးများနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့သော အသေးစား cannabinoids ပါ၀င်သည့် ထုတ်ကုန်များဖြင့် ဆန်းသစ်တီထွင်သူများ။"
အပြည့်အဝ Spectrum CBG ဆီ
ဈေးနှုန်း – $95
သီးခြားဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ — ဟုတ်ကဲ့
ထုတ်ယူ Labs က CBD Tincture
အဆိုပါ အပြည့်အ၀ CBG ဆီ Extract Labs ၏ အထင်ကရထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် CBD 1,000 မီလီဂရမ်နှင့် CBG 1,000 မီလီဂရမ်တို့ ပါဝင်ပြီး 1:1 အချိုးတွင် CBG နှင့် CBD ပါဝင်သည့် ပထမဆုံးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အဆီသည် အပင်တစ်ပင်လုံးမှ ထုတ်ယူမှု အနည်းငယ်ကို အသုံးပြုပါသည်။ တစ်ဖန်၊ ၎င်းသည် အပင်တွင် သဘာဝအတိုင်းတွေ့ရှိရသော cannabinoids နှင့် terpenes များ အပြည့်အစုံကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ရောစပ်မှုသည် အလွန်အစွမ်းထက်ပြီး လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ အိပ်မပျော်မှုနှင့် မသက်မသာများအတွက် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သဘာဝအတိုင်း အပင်နှင့်တူသော အရသာရှိပြီး အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်။
လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ ဖော်မြူလာအထိ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စင်ကြယ်သောဆီသည် အရည်အသွေး အမြင့်မားဆုံး စံချိန်စံညွှန်းကို လိုက်နာသော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းမှုနှင့် အာနိသင်မြင့်မားကြောင်း သေချာစေရန် ၎င်းသည် ခေတ်မီဆန်းသစ်သော ထုတ်ယူနည်းလမ်းများနှင့် ပရီမီယံ၊ အော်ဂဲနစ်၊ US စိုက်ပျိုးထားသော လျှော်ပင်ထုတ်ယူမှုကို အသုံးပြုပါသည်။ Puroil ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးသည့်အခါ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီကို ထိရောက်မှုနှင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကို သက်သေပြရန် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီတွင် စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး၊ ထို့ကြောင့် သုံးစွဲသူများအတွက် နောက်ထပ်အာမခံချက်အဆင့်တစ်ခုကို ပေါင်းထည့်ထားသည်။
ဈေးနှုန်း – £69.99
အဆိုပါ Puroil မှညဖော်မြူလာ 1,000mg CBD၊ passionflower နှင့် camomile တို့ပါရှိသည်။ passionflower မှာ gamma-aminobutyric acid ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို လျှော့ချပေးပြီး စိတ်တည်ငြိမ်မှု နဲ့ ပြေလျော့စေမယ့် ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ camomile သည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို လျှော့ချရန်နှင့် အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို မြှင့်တင်ရန် လူသိများသည်။
ပျော်ရွှင်မှုကို ကုစားပါ။ ဆီများ၊ လိမ်းဆေးများ၊ နှင့် ဆေးများ အပါအဝင် အထင်ကြီးလောက်သော ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်အားလုံးကို ကော်လိုရာဒိုရှိ ကုမ္ပဏီ၏ခြံများတွင် စိုက်ပျိုးထားသော ပိုးသတ်ဆေးကင်းစင်ပြီး GMO မဟုတ်သော လျှော်ပင်များမှ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ “Cure Injoy ထုတ်ကုန်များသည် အရည်အသွေးအားဖြင့် စျေးကွက်ရှိ အခြားထုတ်ကုန်များနှင့် ကွဲပြားသည်။ Cure Injoy သည် မျိုးစေ့မှအညွှန့်အထိ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းအထိ၊ ထုတ်ကုန်အထိ၊ သင့်အိမ်ရှေ့တံခါးအထိ အရည်အသွေးကို စောင့်ကြည့်သည်။” ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်က ပြောသည်။
သန့်စင်သော CBD ဆီ
ပျော်ရွှင်မှုကို ကုစားပါ။ စင်ကြယ်သော CBD
စင်ကြယ်သော CBD CBD isolate နှင့် အုန်းဆီတို့မှ ထုတ်လုပ်ထားသော သဘာဝ လျှော်အရသာရှိပြီး အလွန်သာယာသည်။ စားသုံးခြင်းအပြင် ဆီသည် လိမ်းဆေးသုံးရာတွင်လည်း အသုံးဝင်သည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးစွယ်စုံရနှင့်အလွန်ထိရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းသည် သင်ရွေးချယ်သော ခွန်အားပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသော်လည်း သင့်အတွက် တန်ဖိုးများစွာရှိမည်ဟု စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။
SunMed ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ စိန့်ပီတာစဘတ်အခြေစိုက် နာမည်ကြီး CBD အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Rachel နှင့် Marcus Quinn တို့မှ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Rachel's Chron's disease အတွက် အထောက်အကူတစ်ခုအဖြစ် CBD ရေနံ၏အံ့ဖွယ်များကို အသုံးချခဲ့သည်။ ပထမဆုံး "You CBD Store" ကို 2018 ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး US တစ်ဝှမ်းတွင် ရာနှင့်ချီသော franchise တည်နေရာများ ပေါ်ပေါက်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် SunMed ထုတ်ကုန်များကို အွန်လိုင်းတွင် ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် CBD tincture နှင့် CBD လိမ်းဆေးအတွက် 2019 USA CBD Expo ထူးချွန်ဆုများဖြစ်သည့် အထင်ရှားဆုံးဆုအများအပြားကို ရရှိခဲ့သည်။
အစွမ်းသတ္တိ - cannabinoids 660mg၊ 500mg CBG ဖြစ်သည်။
ဈေးနှုန်း – $110
အဆိုပါ Broad Spectrum Tincture CBG Dominant ထုတ်ကုန်သည် နေ့ခင်းဘက်ဆီ အမျိုးမျိုးသော အကူအညီဖြစ်သည်။ ဖော်မြူလာတွင် USDA အသိအမှတ်ပြုထားသော အပင်တစ်ပင်လုံး လျှော်ပင်များပါရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ SunMed ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။တစ်နေ့တာစတင်ရန် ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အခက်အခဲများကို ဖြတ်ကျော်ရန် သက်လုံကောင်းရရှိစေမည့်နည်းလမ်းကို ကတိပေးသောကြောင့် သင့်နံနက်ခင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွင် ပေါင်းထည့်သောအခါတွင် အဆီသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု ပိုရပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာရာရစေတယ်။
101cbd boost cbd oil citrus
alpinols cbd ဆီ
ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ CBG ဆီ ထုတ်ယူသည်။
နေ့တစ်ဝက် cbd tincture ကိုခွဲထုတ်
ပညာရှိစိတ်ဖိစီးမှု cbd ၏အိမ်
leafwell ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ full spectrum cbd oil tincture
purekana pm cbd ဆီ
သဘာဝ REM ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
NATURECAN သုံးသပ်ချက် 2022